မြွေဖြူအိပ်မက်မက်ရင် ကံကောင်းပြီသာမှတ်တော့…! – Trend.com.mm
လူတိုင်းရဲ့ ဘ၀မှာ အပြည့်ချင်ဆုံးဆုတစ်ဆုကဘာများဖြစ်မလဲ? ထီသာပေါက်ကြည့်လိုက် ဘာလုပ်မှာ၊ညာလုပ်မှာနဲ့စိတ်ကူးတွေယဉ်ထားကြတာပါ။ဒီတော့ ထီပေါက်ချင်တာဟာ ဘ၀မှာအပြည့်ချင်ဆုံးဆုပါပဲ။ဒါပေမဲ့ ထီသာလတိုင်းထိုးတယ်။မပေါက်ဘူး။ကြာလာတော့ စိတ်ဓာတ်ကျလာတယ်။စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့၊အတိတ်နမိတ်တို့၊အိပ်မက်တို့ကိုသတိထားတတ်မယ်ဆိုရင် ထီပေါက်ဖို့အခွင့်အရေးပိုပြီးများလာနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုအတိတ်နိမိတ်လဲ။အိပ်မက်လဲ? မြွေဖြူအိပ်မက်ပါ။အိပ်မက်ထဲမှာ မြွေဖြူတွေ့တယ်၊မြွေဖြူတွေအများကြီးအုပ်စုလိုက်တွေ့တယ်ဆိုတာသင့်ရဲ့ ကံကောင်းစေတဲ့နိမိတ်ပါပဲ။အဲ့အိပ်မက်သာမက်လို့ကတော့ ထီသာပြေးထိုးလိုက်ပါတော့။ထီမပေါက်ဘူးဆိုရင်တောင် တစ်ခြားကံကောင်းမှုတွေ
ရလာတတ်ပါတယ်။အဖြူရောင်မြွေနဲ့ကံကောင်းတာကဘယ်လိုဆက်စပ်နေတာလဲဆိုရင် မြွေဖြူဆိုတာ ဘုရားသခင်ရဲ့ ကိုယ်စားပြု၊ဘုရားသခင်ရဲ့ အမှာတော်ပါးစသဖြင့် အယူရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မြွေဖြူဆိုမသတ်ရဘူး။ဒါကကံကောင်းစေတဲ့အနာဂတ်ကိုယူဆောင်လာပေးတဲ့သင်္ကေတလို့ လူကြီးတွေပြောတာကြားဖူးကြမှာပါ။
မြွေဖြူအိပ်မက်မက်တာဟာ တစ်ခြားကံကောင်းမှုတွေထက် သာပါတယ်။အထူးသဖြင့် မြွေဖြူဟာ ငွေကြေးတွေအများကြီးရလာတာ၊ထီပေါက်တာစတဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာ ကံကောင်းစေပါတယ်။မြွေဖြူကိုဖမ်းမိတယ်လို့အိပ်မက်မက်ရင် ထီထိုးဖို့အကောင်းဆုံးပါ။မြွေဖြူတွေကိုသတ်လိုက်တယ်လို့အိပ်မက်မက်ရင် ကံမကောင်းဘူးလို့ထင်စရာရှိပေမဲ့ တကယ်တော့ကံကောင်းတဲ့သင်္ကေတပါ။ဒါကသင့်ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခုမှာအောင်မြင်မယ်လို့နိမိတ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခွင့်အရေးကိုလက်မလွှတ်ပါနဲ့။မြွေဖြူတွေကသင့်အနားကိုရောက်လာတယ်လို့မက်ရင် မကြာခင် သင့်မှာငွေကြေးကံကောင်းလာတော့မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ။မတော်တဆမှုတွေကြုံရရင်တောင်သင်က ဘာအန္တရာယ်မှမကျရောက်နိုင်ပါဘူး။
အိပ်မက်ထဲက မြွေဖြူအကြီးကြီးကကောင်းကင်ပေါ်တက်သွားတယ်လို့မက်ရင် ဒါက တကယ့်ကိုအကောင်းဆုံးအိပ်မက်တစ်ခုပါပဲ။ဒီအိပ်မက်ကသင့်အတွက်ငွေကြေးကံကောင်းမှုတင်မက တစ်ခြားကံကောင်းမှုတွေပါ ဆောင်ယူပေးပါလိမ့်မယ်။အလုပ်ကိစ္စ၊မိသားစုကိစ္စ၊ငွေကြေးကိစ္စအားလုံးအဆင်ပြေသွားတော့မှာပါ။
လူတိုငျးရဲ့ ဘဝမှာ အပွညျ့ခငျြဆုံးဆုတဈဆုကဘာမြားဖွဈမလဲ? ထီသာပေါကျကွညျ့လိုကျ ဘာလုပျမှာ၊ညာလုပျမှာနဲ့စိတျကူးတှယေဉျထားကွတာပါ။ဒီတော့ ထီပေါကျခငျြတာဟာ ဘဝမှာအပွညျ့ခငျြဆုံးဆုပါပဲ။ဒါပမေဲ့ ထီသာလတိုငျးထိုးတယျ။မပေါကျဘူး။ကွာလာတော့ စိတျဓာတျကလြာတယျ။စိတျဓာတျမကပြါနဲ့၊အတိတျနမိတျတို့၊အိပျမကျတို့ကိုသတိထားတတျမယျဆိုရငျ ထီပေါကျဖို့အခှငျ့အရေးပိုပွီးမြားလာနိုငျပါတယျ။
ဘယျလိုအတိတျနိမိတျလဲ။အိပျမကျလဲ? မွှဖွေူအိပျမကျပါ။အိပျမကျထဲမှာ မွှဖွေူတှတေ့ယျ၊မွှဖွေူတှအေမြားကွီးအုပျစုလိုကျတှတေ့ယျဆိုတာသငျ့ရဲ့ ကံကောငျးစတေဲ့နိမိတျပါပဲ။အဲ့အိပျမကျသာမကျလို့ကတော့ ထီသာပွေးထိုးလိုကျပါတော့။ထီမပေါကျဘူးဆိုရငျတောငျ တဈခွားကံကောငျးမှုတှေ
ရလာတတျပါတယျ။အဖွူရောငျမွှနေဲ့ကံကောငျးတာကဘယျလိုဆကျစပျနတောလဲဆိုရငျ မွှဖွေူဆိုတာ ဘုရားသခငျရဲ့ ကိုယျစားပွု၊ဘုရားသခငျရဲ့ အမှာတျောပါးစသဖွငျ့ အယူရှိပါတယျ။ဒါကွောငျ့မွှဖွေူဆိုမသတျရဘူး။ဒါကကံကောငျးစတေဲ့အနာဂတျကိုယူဆောငျလာပေးတဲ့သင်ျကတေလို့ လူကွီးတှပွေောတာကွားဖူးကွမှာပါ။
မွှဖွေူအိပျမကျမကျတာဟာ တဈခွားကံကောငျးမှုတှထေကျ သာပါတယျ။အထူးသဖွငျ့ မွှဖွေူဟာ ငှကွေေးတှအေမြားကွီးရလာတာ၊ထီပေါကျတာစတဲ့ငှကွေေးပိုငျးဆိုငျရာ ကံကောငျးစပေါတယျ။မွှဖွေူကိုဖမျးမိတယျလို့အိပျမကျမကျရငျ ထီထိုးဖို့အကောငျးဆုံးပါ။မွှဖွေူတှကေိုသတျလိုကျတယျလို့အိပျမကျမကျရငျ ကံမကောငျးဘူးလို့ထငျစရာရှိပမေဲ့ တကယျတော့ကံကောငျးတဲ့သင်ျကတေပါ။ဒါကသငျ့ရဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးတဈခုခုမှာအောငျမွငျမယျလို့နိမိတျပွနတောဖွဈပါတယျ။အခှငျ့အရေးကိုလကျမလှတျပါနဲ့။မွှဖွေူတှကေသငျ့အနားကိုရောကျလာတယျလို့မကျရငျ မကွာခငျ သငျ့မှာငှကွေေးကံကောငျးလာတော့မယျဆိုတဲ့အဓိပ်ပာယျပါပဲ။မတျောတဆမှုတှကွေုံရရငျတောငျသငျက ဘာအန်တရာယျမှမကရြောကျနိုငျပါဘူး။
အိပျမကျထဲက မွှဖွေူအကွီးကွီးကကောငျးကငျပျေါတကျသှားတယျလို့မကျရငျ ဒါက တကယျ့ကိုအကောငျးဆုံးအိပျမကျတဈခုပါပဲ။ဒီအိပျမကျကသငျ့အတှကျငှကွေေးကံကောငျးမှုတငျမက တဈခွားကံကောငျးမှုတှပေါ ဆောငျယူပေးပါလိမျ့မယျ။အလုပျကိစ်စ၊မိသားစုကိစ်စ၊ငှကွေေးကိစ်စအားလုံးအဆငျပွသှေားတော့မှာပါ။